Mourinho Oo Seddex Xiddig Doonaya & Man Utd Oo Bedelka Alves Ka Doonatay PSG | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Mourinho Oo Seddex Xiddig Doonaya & Man Utd Oo Bedelka Alves Ka Doonatay PSG
Maalin wanaagsan dhamaan akhristayaasheena sharaftaleh meelkasta oo aad joogtaan kuna soo dhawada barnaamijkeeni wargeysyada iyo waxyaabihi ay ko qoreen suuqa kale iibsiga maanta oo Talaado ah.
Manchester United ayaa doorasho loo siiyay inay la soo wareegto daafaca 7da milyan ginni lagu qiimeeyo ee kooxda Paris Saint-Germain ka dib markii Dani Alves uu go’aan ku gaaray inuu sii joogo Barcelona. (Daily Mail)
Tababaraha kooxda Chelsea Jose Mourinho ayaa u sheegay kooxaha xiiseynaya saxiixa goolhaye Petr Cech inay heshiis ciyaaryahan isku bedelasho la yimaadaan. (Daily Mail)
Tababarihii hore ee Borussia Dortmund Jurgen Klopp ayaa jeclaan lahaa inuu qabto shaqada Liverpool haddii Brendan Rodgers uu ka tago Anfield, sida uu sheegay wakiilkiisa. (The Sun)
Kooxda Manchester United ayaa ku dhow saxiixa xiddiga weerarka ka ciyaara ee kooxda Atletico Madrid Mario Mandzukic iyagoo doonaya inay ku bedelaan booskii uu baneeyay Radamel Falcao. (The Sun)
Jose Mourinho ayaa doonaya inuu xagaaga la soo wareego seddex ciyaaryahan oo uu ku sii adkeeyo kooxdiisa Chelsea. Waxa uu doonayaa goolhaye kursiga keydka u fadhiya Thibaut Courtois madaama Petr Cech uu baxayo waxaana diirada u saaran midkood goolhayayaasha QPR iyo Norwich Robert Green iyo John Ruddy. Mourinho ayaa sidoo kale doonayaa daafaca dhexe ee Atletico Madrid Toby Alderweireld iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Marsielle Gianneli Imbula. (Daily Mirror)
Kooxda Southampton ayaa garwaaqsatay inay daafaceeda midig Nathaniel Clyne u waayi doonto Liverpool sidaasi darteed waxa ay bedelkiisa ka raadinayaan kooxda Sporting Lisbon oo ay ka doonayaan daafacooda Cedric Soares. (Daily Mail)
Kooxaha isku magaalada ah ee Inter Milan iyo AC Milan ayaa ku dagaalami doona saxiixa daafaca kooxda Manchester City Aleksandar Kolarov xagaagan. (Daily Mail)
Tababaraha cusub ee West Ham Slaven Bilic ayaa lacag loo siin doonaa inuu la soo wareego weeraryahanka Chelsea Loic Remy iyo xiddiga khadka dhexe ee Barcelona 18 sanno jirka Alen Halilovic. (The Guardian)